Gumiguru 16, 2018 arun
Mhirizhonga magazini sainzi ndizvo zvinotaura Bitcoin kusimba sezvakangoita mafuta uye Dollar
A itsva Paper yakabudiswa mumagazini inonzi nesayenzi “mhirizhonga” kunoratidza kuti volatility kuti misika cryptocurrency zvikuru zvakafanana zvinotarisirwa tsika yesangano semafuta uye nendarama. Maererano Stanisław Drozdz, Munyori mukuru kudzidza uye purofesa panguva Institute of Zvenyukireya Physics wePolish Academy of Sciences, izvi zvinogona kureva kuti misika Forex aigona kuva vamwe makwikwi chaiko kubva cryptosphere.
Pepa anotsanangura kuti nezveizvi anogona kutorwa souchapupu hwokuti Bitcoin, uye zvichida zvimwe mumisika cryptocurrency, ingangokonzera chaiyo kuva dzose misika, zvakananga makwikwi pamwe Forex pamusika. Plus, vanyori nharo kuti cryptocurrencies kupa nemamwe maonero kupinda Statistical zviri musika kuibvisa trajectory, nemhaka mukuru-Frequency mutengo Data ari nyore.
Australian Hurumende Meso blockchain kuti pfuma kwema
Sechikamu zano kuisa zvose pfuma kwema munzvimbo digitaalinen hwaJehoshafati, New South Wales hurumende yeAustralia unotsauka kuna blockchain zvemichina. With hurumende wakati akarayira digitization vose pfuma kwema kubudikidza July 1, 2019, NSW Land yokunyoresa Services - the opareta munyika titling uye yokunyoresa kuvhiyiwa rehurumende - iri nezvekutanga uchapupu-of-pfungwa (PoC) kutongwa kuyera kana blockchain ndiyo nzira yakanakisisa kuenda.
Nokuti hwokugadzira divi nesimba, inoshandiswa ari partnering pamwe Sweden anotsanangura ChromaWay kuitisa PoC pamusoro wayo blockchain papuratifomu, pamwe kupera kutarisirwa mangwanani gore rinouya. pari zvino, mushumo, nyika yose kwema zvinonyorwa manually uye zvakanyorwa mu evoruzhinji. Pakangotanga digitization kwacho kwapera, kuti hazvizorambi zvakadaro uye bepa zvibvumirano hazvizorambi rinoshanda. The startup akati: “It achapa munhu zvizere uye nzwisisika maonero kodzero nyika, kurambidzwa, uye mabasa, izvo zvichaita streamline sarudzo kuti hurumende uye nyika chikamu vatambi, kupa rakawedzera ruzivo pachena, uye kuderedza date kuburitsa mufananidzo.”
Survey inoratidza 52% kuti makambani ari pamusoro chinyakare brokerages vanoda mari mu cryptocurrency
Muongororo yakaitwa itsva kufukidza zvikuru kufarira cryptocurrencies, LendEDU, rinoongorora pamusika tsika vanoita. The zvabuda anoratidza kuti 52% pane ingangokuudza kushandisa brokerage zvavo nyaya mari mu cryptocurrency, kana kusarudza iripo, uye 59% tsika vanoita vanodavira brokerage yavo ichapa cryptocurrencies mune ramangwana.
The 1,000 vacho vakuru American uyo aimbotaurawo ongororo havasi Pari paakapiwa mu cryptocurrencies. pachinzvimbo, vanoita izvi bata chinyakare zvinhu, dzakadai mumatanda uye zvisungo. Ndivo vatengi kuti brokerages kuti murege kupa zvakananga cryptocurrency upfumi.
Yevakapindura bata nyaya panguva dzinotevera brokerages:
Dyidzana nevaichinja - 4%
Nhoroondo yokuisira yakaratidza kuti vaizova kuvimba chetsika brokerage kupfuura Coinbase kuti kubata crypto kwavo - 41% zvichienzaniswa 14%. Vaizova kuvimba Amazon kupfuura Coinbase - 39% zvichienzaniswa 15%. Ongororo inoratidza kuti tsika brokerages vane chaiyo vomuzana unomutsa mukana nokukwanisa andobata rakabatanidzwa 48% of vakabvunzwa. The paIndaneti pokuongorora kwakaitwa pamusoro remazuva mashanu nguva kubva September 21 kuna September 25, 2018.
Coinbase anovhura Dublin hofisi
Coinbase yakashamisa hofisi wayo mutsva muDublin, Ayarendi. By nokuvhura hofisi itsva Irish, kambani iri kutarisirwa kuwedzera remapazi ayo kupinda yose European Union. Michael D'Arcy, wokuIreland Minister nokuti Financial Services uye Insurance akati "Ndinofara kuti Coinbase anosvinudza muhofisi muna muDublin. Chisarudzo ichi runosimbisa kukwikwidzana chinopiswa uye kukwezva of Ireland paminamato zvemari. "
Coinbase zvakare yakati "Uyewo zano B kuti Brexit. Sezvatinoongorora waronga eventualities zvose, zvinokosha kuti isu tirambe SERVICING vatengi vedu muEurope, uye Ireland aizova yedu vaifarira kusarudza ikoko kana toreva pairi. "
zuro, musi February 20, the...
Previous Post:Blockchain News 15.10.2018
Next Post:Blockchain News 17.10.2018
Gumiguru 27, 2018 pa 3:54 PM